KENKAN WƆ Albanian Arabic Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Malayalam Myanmar Norwegian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Rarotongan Romanian Samoan Sepedi Shona Silozi Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Zulu
SƐ WOHWƐ sɛnea asorɔkye bɔ kɔ soro no a, ɛyɛ fɛ, nanso wɔ hyɛn mu adwumayɛfo fam de ɛkyerɛ asiane. Saa nsu a ɛreyiri no betumi ama wɔahwere wɔn nkwa.
Saa ara na Onyankopɔn asomfo nso betumi ahyia nhyɛso ahorow a ebetumi abunkam wɔn so. Ebia woahu sɛ ɔtaa ne sɔhwɛ ahorow ba Kristofo so ntoatoaso na ɛhyɛ wɔn so. Akyinnye biara nni ho sɛ esiane sɛ wompɛ sɛ wugu asu wɔ honhom fam nti, wopɛ sɛ woko tia denneennen. (1 Timoteo 1:19) Adwempa a wubenya no betumi aboa wo ma woako atia. Dɛn ne adwempa, na ɔkwan bɛn so na wonya?
Hebri asɛmfua mezim·mahʹ, a wɔkyerɛɛ ase “adwempa” no fi asɛmfua a ɛkyerɛ sɛ “wɔfa biribi ho adwene anaasɛ wɔbɔ pɔw” mu. (Mmebusɛm 1:4) Ne saa nti, Bible nkyerɛase bi kyerɛ mezim·mahʹ ase sɛ “anidahɔ” anaa “nhumu.” Bible ho animdefo Jamieson Fausset ne Brown kyerɛkyerɛ mezim·mahʹ mu sɛ “ahwɛyiye a wɔyɛ de kwati bɔne de hwehwɛ papa.” Eyi kyerɛ sɛ yebesusuw nea ebefi yɛn nneyɛe mu aba daakye ne mprempren yi ara no ho. Sɛ yɛwɔ adwempa a, yebesusuw nneɛma ho yiye ansa na yɛayɛ, titiriw bere a ɛsɛ sɛ yesi gyinae atitiriw bi no.
Sɛ obi a ɔwɔ adwempa si daakye anaasɛ tebea bi a ɔwom mprempren ho gyinae a, odi kan susuw ɔhaw anaa asiane a ebetumi afi mu aba no ho. Sɛ onya hu asiane horow a ebetumi afi mu aba no a, ɔhwɛ ɔkwan a ɔbɛfa so akwati, bere a osusuw nkɛntɛnso a ebetumi anya wɔ beae a ɔte ne nnipa a ɔne wɔn te so ho no. Ɔnam saayɛ so betumi asusuw sɛnea obetumi ayɛ ade ma mfaso afi mu aba, anaa mpo Onyankopɔn ahyira so ho. Ma yensusuw nhwɛso ahorow bi a mfaso wɔ so a ɛkyerɛkyerɛ adeyɛ yi mu ho nhwɛ.
Kwati Nna mu Ɔbrasɛe Ho Afiri
Sɛ mframa pia asorɔkye a ano yɛ den ma ɛbɛbɔ ahyɛmma bi anim a, wɔka tebea no ho asɛm sɛ asorɔkye a ɛbɔ fi anim ba. Sɛ hyɛn mu adwumayɛfo ammɔ mmɔden anhyia asorɔkye no a, ebetumi abutuw wɔn hyɛn no.
Yehyia tebea a ɛte saa ara, bere a yɛwɔ wiase a nna mu ɔbrasɛe ahyɛ mu ma mu no. Da biara, yehyia adwene ne nsusuwii ahorow. Yɛrentumi mmu yɛn ani ngu nkɛntɛnso a ebetumi anya wɔ nna ho akɔnnɔ a yɛtaa nya so no so. Ɛsɛ sɛ yɛde adwempa ko tia saa sɔhwɛ no denneennen, sen sɛ yɛde yɛn ho bɛkɔ akɔhyɛ tebea horow a ɛyɛ hu mu.
Sɛ nhwɛso no, Kristofo mmarima taa ne wɔn a wommu mmea papa, na mmom wobu wɔn sɛ nnipa a wɔne wɔn da kɛkɛ no na ɛyɛ adwuma. Mfɛfo adwumayɛfo betumi de ahuhusɛm ne nguamansɛm afrafra wɔn nkɔmmɔbɔ mu. Awiei koraa no, tebea a ɛte saa betumi de ɔbrasɛe ho adwene adua Kristoni adwenem.
Ebia wɔbɛfa Kristoni bea bi wɔ adwumam ma enti wahyia nsɛnnennen. Ebetumi aba sɛ ɔne mmarima ne mmea a wɔne no nni abrabɔ gyinapɛn koro na ɛbɛyɛ adwuma. Ebia mmarima a ɔne wɔn yɛ adwuma no mu biako bɛkyerɛ ne ho anigye. Mfitiase no, ebia ɔne no bedi no ayamye so, ma mpo wakyerɛ obu ama ɔsom ho adwene a okura no. Sɛnea ɔbarima no kɔ so de n’adwene si ne so no betumi aka no ma wabɛn no.
Sɛ́ Kristofo no, ɔkwan bɛn so na adwempa betumi aboa yɛn wɔ tebea a ɛtete saa mu? Nea edi kan no, ebetumi atwe yɛn adwene akɔ honhom fam asiane ahorow so, na nea ɛto so abien no, ebetumi akanyan yɛn ma yɛahwɛ ɔkwan a yɛbɛfa so ayɛ yɛn ade wɔ nyansam. (Mmebusɛm 3:21-23) Wɔ tebea horow a ɛtete sɛɛ mu no, ebehia sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu kyerɛ yɛn mfɛfo adwumayɛfo no pefee sɛ esiane Kyerɛwnsɛm mu gyidi ahorow a yekura nti, ɛsono yɛn gyinapɛn. (1 Korintofo 6:18) Yɛn kasa ne yɛn nneyɛe betumi ahyɛ saa asɛm no mu den. Bio nso, ebia ebehia sɛ yɛto sɛnea yɛne yɛn ayɔnkofo binom bɔ no ano hye.
Nanso ɛnyɛ baabi a yɛyɛ adwuma nkutoo na ɔbrasɛe ho nhyɛso wɔ. Sɛ awarefo ma kwan ma ɔhaw ahorow sɛe wɔn ntam biakoyɛ a, ebetumi ama asɔre. Ɔsomfo kwantufo bi kae sɛ: “Aware mu ntetewmu biara nni hɔ a ɛba prɛko pɛ. Awarefo no de nkakrankakra betumi ama wɔn ntam atetew, a wɔntaa ne wɔn ho nkasa anaasɛ wɔmmɔ. Wobetumi adi honam fam nneɛma akyi de asi anigye a enni wɔn aware mu no ananmu. Na esiane sɛ wonnya bere mma wɔn ho wɔn ho nti, ebetumi ama wɔabɛn afoforo a ɛsono wɔn bɔbeasu.”
Ɔsomfo a ne ho akokwaw yi toaa so sɛ: “Ɛsɛ sɛ bere ne bere mu no, awarefo tra ase susuw ho sɛ ebia biribi resɛe wɔn ntam abusuabɔ anaa. Ɛsɛ sɛ wɔyɛ sɛnea wɔbɛbom asua ade, abɔ mpae, na wɔakɔ asɛnka ho nhyehyɛe. Sɛ wɔne wɔn ho di nkɔmmɔ wɔ fie, ‘wɔ kwan so, bere a wɔkɔda, ne bere a wɔsɔre,’ sɛnea awofo ne mmofra yɛ no a, wobenya so mfaso pii.”—Deuteronomium 6:7-9.
Nneyɛe a Ɛmfata Kristofo Ano a Yebegyina
Boa a adwempa betumi aboa yɛn ma yɛagyina ɔbrasɛe ho sɔhwɛ ano akyi no, ebetumi aboa yɛn ma yɛagyina nsɛnnennen a ɛba yɛne yɛn mfɛfo Kristofo ntam no ano nso. Sɛ mframa bɔ asorɔkye ma ɛbɔ fi ahyɛmma no akyi a, ɛma asorɔkye no ne ahyɛmma no nyinaa kɔ faako. Asorɔkye no betumi ama ahyɛmma no so afi akyi ma adannan no akɔ nkyɛn nkyɛn. Eyi ma ahyɛmma no nkyɛnmu hwɛ asorɔkye no ma etumi sɛe no.
Asiane a efi beae a yɛnhwɛ kwan betumi aba yɛn nso so. Yɛne yɛn nuanom Kristofo mmarima ne mmea anokwafo de “mmati koro” na ɛsom Yehowa. (Sefania 3:9) Sɛ wɔn mu bi anyɛ n’ade sɛ Kristoni a, ebetumi ayɛ sɛ nea wadi yɛn huammɔ, na ɛbɛma yɛn werɛ ahow kɛse. Ɔkwan bɛn so na adwempa betumi abɔ yɛn ho ban afi kari a yɛrenkari pɛ ne pira a yebetumi apira ho?
Kae sɛ “onipa bi nni hɔ a ɔnyɛ bɔne.” (1 Ahene 8:46) Ɛnsɛ sɛ ɛyɛ yɛn nwonwa sɛ, ɛtɔ da bi a onua Kristoni bi betumi ahyɛ yɛn abufuw anaasɛ wayɛ yɛn bɔne. Esiane sɛ yenim eyi nti, yebetumi asiesie yɛn ho ama ɔhaw a ɛte saa na yɛadwen sɛnea ɛsɛ sɛ yɛyɛ yɛn ade wɔ ho no ho. Ɔsomafo Paulo yɛɛ n’ade dɛn bere a ne nuanom Kristofo no bi kaa ne ho asɛm wɔ animtiaabu kwan a ɛyɛ yaw so no? Sɛ́ anka ɔbɛhwere ne honhom fam gyinabea no, ɔkae sɛ Yehowa anim dom a obenya no ho hia sen sɛ obenya nnipa anim dom. (2 Korintofo 10:10-18) Su a ɛte saa a yebenya no bɛboa yɛn ma yɛrempɛ ntɛm nyɛ ade bere a obi ahyɛ yɛn abufuw no.
Ɛte sɛ nea yɛde yɛn nan apem ɔbo no. Sɛ biribi a ɛte saa si a, ebia yɛrentumi nsusuw nneɛma ho yiye wɔ simma biako anaa abien mu. Nanso sɛ yaw no ano brɛ ase a, yebetumi asusuw nneɛma ho yiye na yɛayɛ yɛn ade sɛnea ɛfata. Saa ara na ɛnsɛ sɛ yɛpere yɛn ho yɛ ade bere a obi aka asɛm a ɛyɛ yaw akyerɛ yɛn anaa wayɛ yɛn biribi a yɛmpɛ no. Mmom no, ɛsɛ sɛ yɛtɔ yɛn bo ase na yesusuw nea ebetumi afi nneyɛe a ɛmfata a yɛbɛyɛ de atua onii no so ka mu aba no ho.
Malcolm a ɔde mfe pii ayɛ asɛmpatrɛw adwuma no kyerɛkyerɛ nea ɔyɛ bere a obi afom no no mu. “Nea midi kan yɛ ne sɛ mibisa me ho nsɛm bi te sɛ: So me bo afuw onua yi esiane yɛn adwene a enhyia no nti? So nea ɔkae no ho hia ankasa? So nkɛntɛnso a atiridiinini anya wɔ me so no na ama me nkate mu ayɛ den no? So nneɛma bɛsesa wɔ m’ani so wɔ nnɔnhwerew kakraa bi ntam?” Mpɛn pii no, sɛnea Malcolm ahu no, wontwiwontwi no ho ntaa nhia biara, na ɛyɛ nea obetumi abu n’ani agu so. *
Malcolm toa so sɛ: “Ɛtɔ bere bi a, ɛmfa ho mmɔden a mɛbɔ sɛ mesiesie tebea no biara no, onua a me ne no wɔ asɛm no nnyae mu ara. Mebɔ mmɔden sɛ meremma eyi nhaw me. Sɛ minya yɛ nea metumi nyinaa wie a, minnwen asɛm no ho pii bio. ‘Meto m’adwenem wɔ ho’ sen sɛ mede bɛhaw me ho. Meremma kwan mma ɛnsɛe me honhom fam yiyedi anaa me ne Yehowa ne me nuanom ntam abusuabɔ.”
Te sɛ Malcolm no, ɛnsɛ sɛ yɛma obi subammɔne haw yɛn mmoroso. Anuanom mmarima ne mmea a wɔn ho yɛ anigye na wodi nokware wɔ asafo biara mu. Ɛyɛ anigye sɛ yɛne wɔn ‘bɛbɔ anan’ anantew wɔ Kristofo kwan so. (Filipifo 1:27) Sɛ yɛkae ɔdɔ mu a yɛn soro Agya no fi boa yɛn no a, ɛno nso bɛboa yɛn ma yɛasusuw nsɛm ho yiye.—Dwom 23:1-3; Mmebusɛm 5:1, 2; 8:12.
Nneɛma a Ɛwɔ Wiase a Yɛrennɔ
Adwempa betumi aboa yɛn ma yɛadi anifere kwan so nhyɛso foforo so. Sɛ mframa ma asorɔkye bɔ ahyɛmma mpuran anaa ne nkyɛnmu a, wɔfrɛ no mpuran asorɔkye. Sɛ wim ye a, asorɔkye a ɛte saa no de nkakrankakra bepia ahyɛmma no afi ne kwan mu. Nanso, sɛ ahum tu a, mpuran asorɔkye betumi ama hyɛmma no abutuw.
Saa ara na sɛ yegyae yɛn ho mu de yɛn ho hyɛ wiase bɔne yi mu nneɛma mu fẽẽ a, honam fam ade dodowpɛ asetra kwan yi betumi ama yɛagu asu wɔ honhom fam. (2 Timoteo 4:10) Sɛ yɛanteɛ yɛn ho so a, wiase akɔnnɔ de nkakrankakra bɛma yɛagyaw yɛn Kristofo asetra kwan no koraa. (1 Yohane 2:15) Ɔkwan bɛn so na adwempa betumi aboa yɛn?
Nea edi kan no, ebetumi aboa yɛn ma yɛasusuw asiane ko a yebetumi ahyia no ho. Wiase no nam nyansakwan so de aguadi ho dawurubɔ twetwe yɛn adwene. Ɛkɔ so de asetra kwan a wosusuw sɛ ɛsɛ sɛ obiara di akyi—adefo asetra kwan a ɛyɛ ahohoahoa, wɔn a wɔn ho yɛ fɛ, ne “wɔn a wɔayɛ yiye” de—puapua yɛn. (1 Yohane 2:16) Wɔma yenya awerɛhyem sɛ obiara ani begye yɛn ho, ne titiriw yɛn atipɛnfo ne afipamfo. Adwempa bɛboa yɛn ma yɛako atia nnaadaasɛm yi, na akae yɛn hia a ɛho hia sɛ ‘yɛtwe yɛn ho fi sikanibere’ ho efisɛ Yehowa ahyɛ bɔ sɛ ‘ɔrennyaw yɛn.’—Hebrifo 13:5.
Nea ɛto so abien no, adwempa bɛma yɛatwe yɛn ho afi wɔn a ‘wɔaman afi nokware no ho’ no ho. (2 Timoteo 2:18) Ɛyɛ den paa sɛ yɛbɛkasa atia wɔn a yɛapɛ wɔn asɛm na yɛagye wɔn adi pɛn no. (1 Korintofo 15:12, 32-34) Sɛ mpo wɔn a wɔaman afi Kristofo nokware kwan no so nya yɛn so nkɛntɛnso kakraa bi a, ebetumi asiw yɛn honhom fam nkɔso kwan na awiei koraa no ɛde yɛn akɔ asiane mu. Yebetumi ayɛ sɛ ahyɛmma a aman kakraa bi afi ne kwan so no. Sɛ etwa kwantenten a, ebia ɛrennu faako a ɛrekɔ no koraa.—Hebrifo 3:12.
Adwempa betumi aboa yɛn ma yɛahu faako a yegyina wɔ honhom fam ne faako a yɛn ani kyerɛ. Ebia na yɛahu hia a ehia sɛ yɛde yɛn ho hyɛ Kristofo som adwuma no mu kɛse no. (Hebrifo 6:11, 12) Hyɛ sɛnea adwempa boaa Ɔdansefo kumaa bi ma odii honhom fam botae ahorow ho dwuma no nsow: “Minyaa hokwan a na ɛbɛma matumi akosua ade abɛyɛ sɛnkyerɛwfo. Na m’ani gye ho paa, nanso mekaee Bible mu asɛm a ɛka sɛ ‘wiase retwam,’ na ‘nea ɔyɛ ade a Onyankopɔn pɛ no tra hɔ daa’ no. (1 Yohane 2:17) Misusuw ho sɛ, ɛsɛ sɛ nea mede m’asetra bɛyɛ no ne me gyidi hyia. Ná m’awofo agyaw Kristofo gyidi no, na na mempɛ sɛ medi wɔn nhwɛso no akyi. Enti misii me bo sɛ mɛbɔ bra a atirimpɔw wom na mede me ho hyɛɛ bere nyinaa som adwuma no mu sɛ daa ɔkwampaefo. Wɔ mfe anan akyi no, mihui sɛ mapaw nea eye.”
Honhom Fam Asorɔkye a Yebedi so Nkonim
Dɛn nti na ɛho abehia paa sɛ yenya adwempa nnɛ? Ɛsɛ sɛ hyɛn mu adwumayɛfo yɛ ahwɛyiye wɔ asiane ho sɛnkyerɛnne ho, titiriw bere a asorɔkye gu so rebɔ no. Sɛ wim yɛ nwini prɛko pɛ na sɛ mframa ano yɛ den a, womiamia hyɛnnua no mu, na wosiesie wɔn ho ma tebea a ɛreba no. Saa ara na ɛsɛ sɛ yesiesie yɛn ho sɛ yebehyia nhyɛso a ano yɛ den biara bere a nneɛma nhyehyɛe bɔne yi rekɔ n’awiei no. Ɔmanfo asetra resɛe na ‘nnipa bɔnefo kɔ wɔn anim wɔ bɔne mu.’ (2 Timoteo 3:13) Sɛnea hyɛn mu adwumayɛfo taa tie wim tebea ho amanneɛbɔ no, saa ara na ɛsɛ sɛ yetie nkɔmhyɛ nsɛm a ɛyɛ kɔkɔbɔ a ɛwɔ Onyankopɔn Asɛm a efi honhom mu no mu no.—Dwom 19:7-11.
Sɛ yɛde adwempa di dwuma a, na yɛde nimdeɛ a ɛde kɔ daa nkwa mu redi dwuma. (Yohane 17:3) Yebetumi adi kan asusuw ɔhaw ahorow bi a ɛbɛba ho na yɛasi ɔkwan a yɛbɛfa so adi so no ho gyinae. Saa a yɛbɛyɛ no bɛma yɛasiesie yɛn ho yiye na yɛamman amfi Kristofo asetra kwan no so, na ɛbɛma yɛatumi ‘ato nhyɛase pa ama daakye’ denam honhom fam botae ahorow a yebedi akyi so.—1 Timoteo 6:19.
Sɛ yɛde nyansahu ne adwempa sie a, ɛho renhia sɛ ‘yesuro mpofirim huyi.’ (Mmebusɛm 3:21, 25, 26) Mmom no, yebetumi anya Onyankopɔn bɔhyɛ mu awerɛkyekye: “Sɛ nyansa ba wo koma mu, na nimdeɛ sɔ wo kra ani a, adwempa bɛhwɛ wo so, na ntease abɔ wo ho ban.”—Mmebusɛm 2:10, 11.
^ nky. 19 Ɛsɛ sɛ Kristofo gyina afotusɛm a ɛwɔ Mateo 5:23, 24 no so ma asomdwoe tra wɔn ntam. Sɛ asɛm no fa bɔne a emu yɛ duru ho a, ɛsɛ sɛ wɔbɔ mmɔden sɛ wobenya wɔn nua sɛnea wɔaka ho asɛm wɔ Mateo 18:15-17 no. Hwɛ Ɔwɛn-Aban a ɛbae October 15, 1999 no kratafa 17-22.
Nkitaho a wodi no daa ma aware sɔ
Share Share Ɔkwan Bɛn so na Adwempa Betumi Abɔ Wo Ho Ban?
w02 8/15 kr. 21-24